🥇 ▷ Astaamaha Xiaomi Mi Mix 4 waa la sifeeyaa ✅
Astaamaha Xiaomi Mi Mix 4 waa la sifeeyaa
Xiaomi wuxuu horeyba uga shaqeynaayay guuleystaha Xiaomi Mi Mix 3, aalad aan la kulanay bishii Oktoobar ee sanadkii hore isla markaana heshay nooca 5G bishii May. Xiaomi Mi Mix cusub 4 Waxay ku imaan kartaa shaashad qaloocsan oo leh 2K xalin. Sidoo kale, waxay lahaan doontaa processor Snapdragon 855+ iyo 12 GB oo RAM ah, sidaa darteed waxaa la rajeynayaa inay yeelato wax qabad aad u xiiso badan.
Xanta cusub ee Xiaomi Mi Mix 4 waxay ka timid gacanta shaandhada Aasiya ee caanka ah, oo durbadiiba bartilmaameedsatay bartilmaameedka hore ee shirkadda. In kasta oo aysan jirin faahfaahin ku saabsan qaabeynta suuragalka ah iyo cabirka shaashadda, Waxaan rajeyneynaa inaad mar labaad haysato horjooge hore, adoo aan lahayn xiriir ama dhaqdhaqaaq, oo leh xirmooyin dhawaaqa oo yar. Sida kuwii ka horreeyayba, waxay ku dari kartaa kamarad hore oo aan hoos u dhicin oo keli ah oo dusha sare saari doonta markay qaadanayso iswada.
Sidaynu nidhaahno, Mi Mix 4 wuxuu ku dhexyaalayaa gudaha Snapdragon 855+, oo ah sideed aasaasi ah SoC oo ku ordaya xawaare dhan 2.96 GHz, oo ay wehelinayaan 12 GB oo RAM ah iyo kaydinta 1 TB. Waxaa la sheegay inay la jaan qaadi karto nidaamka UFS 3.0. Dhanka kale, maddaarka wuxuu qalabeyn karaa batteri 4,500 mAh ah oo leh 30W oo degdeg ah. Telefoonka waxaa sidoo kale laga filayaa inuu bixiyo taageerada korantada iyo dib u soo celinta korantada.
Wararka xanta ah ayaa sidoo kale ku doodaya in Xiaomi Mi Mix 4 ay noqon karto mid ka mid ah taleefannadii ugu horreeyay ee shirkadda si ay u siiso MIUI 11 cusub, lakabka soo-saaraha cusub ee soo-saaraha. Heerka sawirka, qaabkani wuxuu sidoo kale raaci lahaa. Waxay ku dari laheyd nidaamka kamarad qaaca ‘gadaasha’ gadaashiisa oo ka kooban aaladda ugu weyn ee 108 megapixels, aaladda labaad oo ah 16 megapixels iyo mid sedexaad oo ah 12-megapixel telephoto sensor. Astaamaha kale ee Xiaomi Mi Mix 4 waxaa ku jiri doona 3.5mm jaakad maqal ah iyo taageero NFC oo ah bixinta mobilada.
Waxay u egtahay in aan si rasmi ah ula kulmi doonno Mi Mix 4 inta lagu jiro bisha Sebtember ama Oktoobar. Waxaan aad u dhegeysan doonaa wararka xanta ah iyo daadashada in lagu siiyo dhammaan xogta si dhakhso leh.
Warar kale oo ku saabsan… Xiaomi